Abantu baseLondon badelele i-COVID kwaye bachitha iholide phesheya ngaphezulu kunezinye iiBrits
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Abantu baseLondon badelele i-COVID kwaye bachitha iholide phesheya ngaphezulu kunezinye iiBrits
Abantu baseLondon bebenokuthi babeke ecaleni amaxhala kwaye bangahoyi iingcebiso malunga nokuhamba ngexesha lo bhubhani.
Abantu baseLondon babonakalise ukuba abazimisele kangako kunabantu abasuka naphina e-UK ukuba bancame iholide yabo yonyaka phesheya ngexesha lobhubhani- nokuba oko kuthetha ukuchasana neengcebiso zikaRhulumente, ukuhlawulela iimvavanyo zokuhamba ze-Covid kunye nokungcakaza kwinkqubo yokukhanya kwetrafikhi - ngokutsho. kuphando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo we-1 kuNovemba) yi-WTM yaseLondon.
Abane kwi-10 (41%) baseLondon bathathe iholide yaphesheya kulo nyaka uphelileyo, kabini umyinge wesizwe we-21%, kwaye ngaphezu kokuphindwe kathathu kunabantu baseMntla Mpuma, ummandla wase-UK obone elona nani liphantsi leeholide zaphesheya. ithathwe kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo.
Kuphela i-13% yabantu abahlala eMntla Mpuma bathatha iholide phesheya ngexesha, ityhila iNgxelo yoShishino lwe-WTM, ephonononge abathengi be-1,000 base-UK.
Abemi baseLondon abaphindwe kabini kunomndilili kazwelonke babhukishe ZOMBINI iholide yaphesheya kunye nokuhlala, kunye ne-9% yabantu abakwikomkhulu lokubhukisha zombini, xa kuthelekiswa nomyinge wesizwe we-4%.
Kuphela yi-36% yabantu baseLondon abangazange bahambe ngeholide kulo nyaka uphelileyo - nokuba kukuhlala okanye kuhambo lwaphesheya kolwandle - xa kuthelekiswa ne-51% yomndilili kazwelonke.
Kubonakala ngathi abantu baseLondon bomelele abakhange baphoswe kuvavanyo lwe-Covid, utshintsho lokukhanya kwetrafikhi kunye nezibongozo ezivela kuRhulumente kunye neengcali ezithe zaphinda zacebisa iBrits ukuba ingahambi phesheya-naxa izithintelo zokuhamba ziye zayekiswa kwaye kusemthethweni ukuya phesheya kweeholide.
Ukunqongophala kokuhamba kwengingqi kwizikhululo zeenqwelo moya ezingaphandle kwekomkhulu nako kusenokuba ngunobangela wokuba abantu abaninzi baseLondon babe ngaphezulu komndilili wesizwe abakhe baphumla phesheya kwezi nyanga zili-12 zidlulileyo.
Ukongeza, ukuvalwa kwendawo kubeka abanye abantu ukuba bahambe baye kwizikhululo zeenqwelomoya ezazingaphakathi, okanye ezazinakho ukufakwa, kwinqanaba elahlukileyo.
UMlawuli weMboniso weWTM eLondon uSimon Press uthe: “Uphando lwethu lubonisa ukuba abantu baseLondon banokubeka bucala amaxhala kwaye bangahoyi iingcebiso malunga nokuhamba ngexesha lo bhubhani.
“Ukuhamba okumbalwa kwengingqi kunye nokuvalwa kwengingqi okuthe kwathetha ukuba abantu abangaphandle kweLondon abakhange bakwazi okanye bazimisele ukubhabha.
“Naxa uhambo lwaluvunyelwa, bekukho uxinzelelo olukhulu oluvela kubaphathiswa bakarhulumente nabacebisi bezempilo ukuba bangahambi.
"Oko, kudityaniswe nesiphithiphithi kunye neendleko zovavanyo lwe-Covid kunye nokutshintsha rhoqo kwemigaqo yokukhanya kwetrafikhi, kubayekise abantu abaninzi ekuhambeni, kodwa kubonakala ngathi abantu baseLondon babezimisele ngakumbi kuninzi lokufumana ikhefu labo eliqhelekileyo phesheya - nokuba kuthini na okongeziweyo. iindleko okanye ubunzima. "